O yitere ọdịnaya dị iche iche | Martech Zone
Monday, July 27, 2009 Sunday, October 4, 2015 Bọọlụ Lorraine
Ọtụtụ mmadụ na-agbanwe n’ike mmụọ ha mgbe ha na-agwa nwata, ezigbo enyi ha ma ọ bụ onye na-anaghị asụ bekee okwu. N'ihi gịnị? N'ihi na otu ọ bụla nwere ntụaka dị iche iche, ahụmịhe, na mmekọrịta ha na onye na-ekwu okwu nke ga-eme ka ikike ha nwere ịkọwa ozi ahụ dịrị.
Otú ahụ ka ọ dịkwa nkwurịta okwu gị ederede ma ọ bụ detuo ederede. Mgbe m na-akwado ndị nwe azụmaahịa na-ejigharị ọdịnaya gafee nyiwe, pịa mbipụta, akwụkwọ ozi akụkọ, post blọọgụ na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ dị mkpa ịhazigharị nnyefe maka usoro a kapịrị ọnụ.
Iji maa atụ: Ide a mbipụta ndị nchụ nta akụkọ na-ekwuwa a ụgwọ ọhụrụ nwere ike ịmalite na:
Ọrụ Marietta Financial Services, ihe ndekọ ego na ụtụ isi nke Indianapolis, atụmatụ ụtụ isi, na omume ịchụ nta azụmahịa, kwupụtara taa Jeffrey D. Hall; CPA abanyela na nzukọ ha dịka onye ndụmọdụ ụtụ isi na azụmaahịa. Jeffrey na-eweta ihe karịrị afọ iri nke nyocha, nyocha na ịkwadebe ụtụ isi na ahụmịhe atụmatụ na ọrụ ọhụrụ a.
Otu ozi gwa na blog ụlọ ọrụ kwesiri ibu ihe omuma, na mkparita uka na olu. Theomi nwere ike ịdị ka nke a:
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa Jeffrey Hall abanyela na Marietta Financial Services, dịka onye ndụmọdụ ụtụ isi na azụmaahịa. Anyị maara na ndị ahịa anyị ga-erite uru site na afọ iri nke nyocha nke Jeffrey, nyocha na ntinye ụtụ na atụmatụ atụmatụ.
Na na elekọta mmadụ media ihe odide kwesiri ka odi nkpa. A Tweet nwere ike ịbụ:
@IGIHE ugbu a bụ onye otu @marietta. Tinye ya na ndepụta ndị ị na - eso, ma zipụ ajụjụ ụtụ gị n'ụzọ ya! (Achọla @jeffhall na Twitter ma, m ka na-arụ ọrụ na onye ahịa ahụ iji mee ka ha gaa ọsọ, nke a bụ ihe atụ nke otu esi eji media.)
Yabụ na oge ọzọ ị ga-ede ihe otu ọkara, Chee echiche banyere otu esi agbanwe ya, ma jikwa ya ebe ndị ọzọ. Iwulite atumatu a n’ime usoro ihe omume gi g’eme nfe ime ka iwulie ihe n’ile gi n’ihu site na iji ihe bara uru.
Jul 27, 2009 na 5:29 PM
I kwuru eziokwu Lorraine. Ọ bụ ezie na ọdịnaya ahụ ga-ekwu otu ihe ahụ, a ga-agbanwe nnyefe ya. Nke ahụ bụ otu njiri mara nke ezigbo onye so dee – ha nwere ike ịgbanwe ụdị ahụ gaa ọnọdụ dị mkpa na ndị na-ege ntị. Nke a bụ n'ezie ikike m ka na-arụ ọrụ.
Jul 27, 2009 na 3:10 PM
Akwa post, Lorraine. Ndị ọrụ gị na Roundpeg bụ ihe doro anya nke ọma ma a bịa n'ịgbazi onye ọ bụla na ịghachite ozi ahụ n'aka onye na-ajụ ya iji mee ka ike ha dị elu ma belata adịghị ike ha!